5 प्रसिद्ध रंगमञ्च युरोप मा | Save A Train Travel Europe
घर > यात्रा युरोप >5प्रसिद्ध रंगमञ्च युरोप मा
युरोप मा प्रसिद्ध रंगमञ्च युरोपेली संस्कृति को कपडे बुना छन्. युरोप मा प्रसिद्ध थिएटर तपाईं असाधारण प्रदर्शन प्रतिज्ञा. यो तपाईं भड्काए छोड्न हुनेछ, सारियो, र हिज्जेबाउन्ड! प्रदर्शन कला को प्रकृति क्षणिक छ र रचनात्मकता spectacularly flourishes. प्रतिभा यी चमक मात्र हाम्रो सम्झनाहरु मा बाँच्न. युरोप मा प्रसिद्ध थिएटर exclusivity र rarity एक अर्थमा सिर्जना. यो साझेदारी समयमा छोटो क्षण छ, र यसको आभा ज्योति आनन्द उठाउँछन् चाहनुहुन्छ हुनेछ.
यी युरोप मा सबै भन्दा प्रसिद्ध थिएटर हाम्रो शीर्ष रुचि को छन्, बस संस्कृति प्रेमी लागि अवश्य-देख्नुहुन्छ:
1. Teatro अल्ला Scala, इटाली
यसलाई हामी इटाली सुरु भनेर मात्र तार्किक देखिन्छ, युरोप मा प्रसिद्ध थिएटर मा एक हावी प्रभाव. को Teatro अल्ला Scalla इटालियन ओपेरा को दुनिया-प्रसिद्ध घर हो.
विगतका ठूलो गायक को सबै भन्दा, अन्तिम दुई सय वर्ष भन्दा बढी, यहाँ प्रदर्शन गरेका छन्. धेरै प्रसिद्ध ओपेरा Othello रूपमा आफ्नो पहिलो यस्तो उत्पादन यहाँ छन्, Nabucco द्वारा Verdi, र Giacomo Puccini द्वारा मेडम बटरफ्लाइ.
यो थिएटर महान् र सुन्दर छ. यसलाई जहाँ तपाईं सार्वजनिक गर्न सामान्यतया खुला नभएका निजी क्षेत्रमा peruse सक्छ संग्रहालय छ. को भारी प्रेक्षालय काठ बाट निर्माण गरिएको छ र Decadent रातो मखमल मा समेटिएको छ. यो एक Bohemian क्रिस्टल झूमर द्वारा रोशनी छ.
2. ग्लोब थिएटर, लन्डन
ग्लोब थिएटर शेक्सपियर ग्लोब रूपमा जानिन्छ. द Bard को Insatiable प्रशंसक युरोप मा यो प्रसिद्ध थिएटर भ्रमण पर्छ. विलियम शेक्सपियर गरेको काम मानव प्रकृति को गहिरो समझ देखाउन. आफ्नो काम captivates दर्शकहरुको. को अंग्रेजी भाषा को आफ्नो महारत आफ्नो नाटकहरु र प्रतिभा को कविता विहीन टुक्रा बनाएको छ.
तपाईं शेक्सपियर को एक प्रेमी हुनुहुन्छ भने, यो निश्चित भएको छ यात्रा गर्न स्थान! प्रभु Chamberlains पुरुष मा तल जल 1613. आज यसको ठाउँमा खडा आधुनिक पुनर्निर्माण यसको मूल स्थानबाट छोटो दूरी छ.
यो तीन तले आउन, नाटकहरु आनंद एम्पिथियटर खुला हावामा. कार्यशालाओं मा भाग. बस्न-मा लेक्चर र अध्ययनहरू मंचन. त्यहाँ राम्ररी उपस्थित नाटकीय कार्यक्रम सबै वर्ष दौर छ र यो युरोप मा प्रसिद्ध थिएटर को सूची मा अवश्य छ.
3. प्याराडाइज ल्याटिन, पेरिस
प्याराडिस ल्याटिन समकालीन हो आउँदै गरेको क्याबरे त्यो मूल ल्याटिन थिएटरको उत्तराधिकारी हो. ल्याटिन थियेटर को 1800 को मा नेपोलियन Bonaparte भन्दा अन्य कुनै पनि द्वारा मूल कमीशन थियो.
धेरै संरचना समयमा तल जल. यो यो एक समावेश. यसको glitz र फ्लेयर लागि प्रसिद्ध, यदि त तपाईं theatrics खोजिरहेको, तपाईं एक bonafide पेरिसियन क्याबरेट शो मा यो पाउनुहुनेछ. उल्लेखनीय क्याबरेट प्रदर्शन संयोजनमा, तपाईं पनि असाधारण acrobatic र ट्रयापिज प्रेरित देख्न सक्नुहुन्छ.
4. Volkstheater, भियना
भियना मा Volkstheater एक छ सुन्दर दृष्टि हेर गर्न. यो पहिलो खुलेको 1889. यो जर्मन भाषी देशहरुमा विश्व मा आफ्नो प्रकारको सबैभन्दा ठूलो हो र एक हेर्नु पर्छ.
को Burgtheater गर्न थप पहुँचयोग्य समकक्ष रूपमा बनाइएको, यो उच्च समाज को लागि समय मा चुनिएको थियो स्थल तर प्रदर्शन कला सबैलाई रमाइलो गर्न को लागि हो. यो महिमित थिएटर को सुरु मा, ध्यान अष्ट्रीया लेखक थियो. आज, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा प्राप्त गरेको छ कि एक व्यापक मुग्ध पार्ने संगीतको साक्षी हुन सक्छ.
को Rote पल्ट को थिएटर को माथिल्लो तल्ला मा छ. यो एक बेशक थप औपचारिक स्थल छ. यो तपाईं परिवेश संगीत सुन्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ छ, क्लब साथै घटनाहरू पढाइ र समकालीन प्रदर्शनियों आनन्द.
5. राष्ट्रिय थियेटर, प्राग
यो प्राग राष्ट्रिय थियेटर उपनाम गरिएको छ कि कुनै आश्चर्य छ, सुनौलो मण्डप. यसलाई आफ्नो नियो-पुनर्जागरण महिमा को सबै गर्व खडा. तपाईं युरोप मा यो प्रसिद्ध थिएटर भ्रमण गर्दा तपाईं आचरण आफैलाई को भाग हो जस्तै महसुस हुनेछ.
राष्ट्रिय थिएटर छ इतिहासको धनी तर मूल भवन तल जल 1881. सम्पूर्ण राष्ट्र प्रदर्शन कला को समर्थन सँगै जुटे. तिनीहरूले पुनर्निर्माण भइरहेको र यो एक पटक थियो यो ठीक भइरहेको यो योगदान.
आज, आउन र ballets एक शानदार विविधता देख्न, नाटकहरु, र प्रेरित र प्रसन्न कि ओपेरा, र पाठ्यक्रम, एक सवारी पकड एक ट्रेन सेव त्यहाँ सम्म पुग्न!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 प्रसिद्ध रंगमञ्च युरोप मा” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-theatres-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#थिएटर ParadisLatin performingarts TeatroAllaScala थिएटर TheGlobeTheatre रेल यात्रा Volkstheater